Vana voshanda pazororo - The Zimbabwean
Vana voshanda pazororo
Pazororo raZvita apo vamwe vana vainge vakazororo Dennis anemakore mapfumbamwe (nine years) ainge ari mutengesi pachiteshi chemudhorobha reChitungwiza achitsvaka mari yekuzviendesa kuchikoro.
“Ndinotengesa airtime kuitira kuti ndiwane mari yekuzobhadhara kana zvikoro zvavhurwa. Mbuya vangu vandinogara navo havakwanise vari voga kuwana mari iyi,” akadaro Dennis.
Kunyangwe hazvo zvikoro zvakavhurwa Dennis anotengesa airtime kana achinge abva kuchikoro.
Kune vamwe vanhu nedzimwe nyika uku kungava kuvhuna kodzero dzemwana asi Dennis anoti anozvikwanisa sezvo vabereki vake vose vakashaya akasiiwa achigara naambuya vakwegura.
Zviuru zvavana munyika yeZimbabwe vanoshanda sezvinoita Dennis kuitira kuti vawane mari yechikoro sezvo hurumende yoremerwa nekuendesa vana kuchikoro pachena.
Kunyangwe hazvo kuine chikamu chaka dzikwa nehurumende chekuita kuti vana vakafirwa nevabereki nevano shaya vaende kuchikoro che Basic Education Assistance Module (BEAM) vashoma vana vari kuiswa pachirongwa ichi.
Kune zvipomerwo kumapato ematongerwo enyika kunyanya Zanu (PF) zvokuti izvo vana vevanhu vanotsingira bato reMDC-T renotungamirwa nemukuru wemakurukota ehurumende Morgan Tsvangirai havasikuiswa pachirongwa cheBEAM.
Sangano rinomirira vasiri kuenda kumabasa reZimbabwe Unemployed People Association (ZUPA) riri kukurudzira hurumende kuti iite svakiridzo yekuongorora mashandisirwo arikuitwa BEAM.
ZUPA rinoti humumende yemubatanidzwa inofanirwa kuona kuti vana vanoshaya vachibva kumhuri dzinoshaya vawana rubatsiro.
Muhurukuro nebepa rino va Innocent Ndabili vanotungamira ZUPA vati izvo inofanirwa kubuda pachena nezveBEAM.
“Takataurira mapato ehurumende kuti tinoda kuti BEAM iongororwe, worondedzera kuvana chirongwa cheBEAM tinoda kuziva kuti sei vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro.
Gore rakapera gurukota re Zvemabasa Nemagariro Evanhu (Minister of Labour and Social Services) Paurina Mpariwa vaka kurudzira mapato kuti arege kuvhiringidza BEAM.
Asi kunyangwe hazvo Mai Mpariwa vakapa kuridziro iyi vana vakaita sa Dennis havasati vaiswa paBEAM, vanotoita zvokushanda pazororo kuitira kuti vawane kuenda kuchikoro. “Se hurumende takatsidzira kuti vana vose vanoshaya vawane mukana pachirongwa cheBEAM. Ticharamba tichitora matanho anoita kuti vana vese vaende kuchikoro,” akadaro Mpariwa.